Madaxweynaha Somaliland Iyo Weftigiisii oo xalay ka Dhoofay Nairobi | Somaliland.Org
Madaxweynaha Somaliland Iyo Weftigiisii oo xalay ka Dhoofay Nairobi
February 9, 2013	Nairobi (Somaliland)-Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) iyo weftigii uu Hoggaaminayay ee maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaaladda Nairobi ee dalka Kenya ayaa xalay abaaro 11-kii habeenimo ka dhoofay madaarka Nairobi iyagoo u kicitimay dalka Ingiriiska.
Wasiirka Arrimaha dibadda Somaliland Md. Maxamed Cabdilaahi Cumar oo xubin ka ah weftiga madaxweynaha ayaa shabakadda wararka ee Somaliland.Org uga waramay socdaalkooda Ingiriiska ka hor intii aanay xalay ka dhoofin dalka Kenya.
“Waxa weftiga madaxweynaha Somaliland oo aan xubin ka ahay waxaanu dalka Ingiriiska kulamo kala duwan kula yeelan doonaa madaxda wadankaasi oo aanu kala hadli doono sidii loo sii adkayn lahaa iskaashiga taariikhiga ah ee labada wadan. Waxaanu diiradda saari doonaa sidii ugala hadli lahayn dhawaaqii bishii hore ka soo yeedhay ee ay dadkooda ugu baaqeen inaanay u socdaalin Somaliland iyo Soomaaliya oo aynu jaar nahay,”ayuu yidhi Wasiirka Arrimaha dibaddu.
Dr. Maxamed Cabdilaahi waxa uu tilmaamay in mudada ay ku sugan yihiin Ingiriiska ay kulamo la yeelan doonaan Wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dalkaasi.
“Waxa kale oo weftiga madaxweynuhu ay Ingiriiska kula kulmi doonaan jaaliyadda Somaliland oo ay uga xog-warami doonaan xaaladda guud ee dalka,”ayuu yidhi Wasiirka Arrimaha dibaddu.
Sidoo kale, Wasiirka Qorshaynta Qaranka Dr. Sacad Cali Shire, oo isna ka mid ah xubnaha Weftiga Madaxweynaha ayaa nooga waramay kulamo ay shalay la yeesheen isaga iyo Wasiirka Khaarajigu madaxa baanka adduunka u qaabilsan mandaqadda bariga Afrika.
Wasiirku waxa uu sheegay inay iska xog-waraysteen shan mashruuc oo Baanka adduunku ka wado Somaliland,kuwaasi oo ay ka mid yihiin ka faa’iidaysiga beeyadda, Kalluunka, horumarinta Ganacsiga, fayo-dhawrka Caasimadda iyo mashruuc ku wajahan horumarinta dekadda Berbera. Dr. Sacad waxa uu tilmaamay inay sheegeen inay mashaariicdaasi fulintooda dhamaystiri doonaan sanadkan.
Wasiirka Qorshayntu waxa uu tilmaamay in saraakiisha ka socotay baanka adduunku ay u sheegeen in aqoonsiga Maraykanka ee Soomaaliya aanu saamayn taban ku yeelan doonin mashaariicdii ay hore ula wadeen Somaliland, inkasta oo ay xuseen inay Soomaaliya xubin buuxda ka noqon doonto Baanka adduunka.
Wasiirku waxa uu intaasi ku daray in saraakiishaasi ay u balan qaadeen Somaliland in mashaariicda ay u kordhin doonaan dhawaan.
Geesta kalena , weftiga Madaxweynuhu waxay khamiistii kulan la yeesheen Danjiraha Maraykanka u fadhiya wadanka Kenya Ropert F. Godec, iyo madax kale oo ay ka mid ahaayeen Brian Phipps, Deputy Special Rep for Somalia, iyo Marwo Hodan Hassan USAID Deputy Director.
Weftiga madaxweyne Axmed Siilaanyo waxa xubno ka ah Wasiirrada Arrimaha dibadda, Qorshaynta iyo Marwadda koowaad ee Somaliland.
Previous PostAmnesty International oo ka Digtey Xidhiidh Milateri oo Dhexmara Ingiriiska iyo SoomaaliyaNext PostShir-gudoonka Wakiiladda Oo Beeniyay Jiritaanka Mooshin ka dhan ah Madaxweyne Ku Xigeenka	Blog